Andriamanitra  | rafozan-doza
Par definition, izy no ilay misy, tsy olombelona i Andriamanitra ary tsy avy eto ambonin'ny tany velively izy. Zany hoe extra-terrestre i A/tra izany. Ra izay aza no zohiana, azo eritreretina ve fa etre, zany hoe "misy" avy any @ galaxia/planeta hafa any izy?
Efa ela ihany no nieritreretako an'io. Efa hatr@ ireny resaka fanahy an'i lapino hoe dimension 10 , @ String theory no mety ahafahana manasokajy ny fanahy kay izay no mahasarotra azy ny mi-concevoir physiquement @ maso hoe ahoana ny poziny... Mifandraika @ izay ihany, sao dia mba "misy" extra-terrestre ary i A/tra. Aza misy misafoaka aloha an.
Jereo anie e, fantatra/inoana fa misy izy fa tsy mbola nisy nahita azy teto ambonin'ny tany. Moa ka tsy mitovy @ izany ihany koa va ny extra-terrestre? Mahalala zavatra maro, mba tsy hilazana hoe ny rehetra izy, ary manana hery ( mety hoe teknolojika??) avo lavitra noho ny fahaizana sy fahafahana an'ny olombelona. Dia extra-terrestre napetraka ee.
Efa elaela izay, nanokatra dinika momba ny fisian'ny aina ivelan'ny tany aho. Tsy dia nisy zavatra mivaingana firy hitako avy tao hoe aiza ho aiza ao @ baiboly ny milaza ny fisian'ny zavatra na misy eny ambony/ambany eny... Zany hoe na ny publication an'i A/tra aza tsy nilaza ny mikasika ny eny. Tsy efa suspect be ve izany?
Ny hany mba hita tao dia ny hoe nisy olona niakatra velona any an-danitra, ilay planeta misy an'i A/tra io. Pouvoir mazika miampy teleportation hoy ah. Misy ny hoe nalefa t@ soavaly vy, fusee fa mbola tsy kobon'zala fotsiny. ka aza taitra ra mahare an'ireny hoe OVNI na otr'zany ireny fa nisy anjely diso lalana... le hoe latsaka an-tany ee
Mahazo misafoaka @ izay
Ny tena tsapako t@ ilay film hoe anjely sy demony iny, dia ny hoe miezaka mi-etouffer ny fikarohana ara-tsiantifika somary tsy nahazatra ny fiangonana (katolika io fa ny secta tsy haiko an). Asa na matahotra nga na hoe sao dia mampivadi-pinoana ny zanakondry be loatra ... fa hoy aho hoe sao dia mba marina ary ity rediredy ity... manakambana ny teoria siantifika sy ny fotom-pinoana kristianina tanteraka anie ity e...
Zany hoe misy ny A/tra izay "misy" any @ planeta hafa any izay tena tompo mahery tokoa mihoatra @ olona ety an-tany. Ndeha hatao hoe mety manana hery @ galaxia antsika koa aza izy. Tsy manova ny teoria izany. Otran'ny hoe isika manana pouvoir mazika @ galaxia an'ny vitsika ohatra...
Ny hany mila ahitsy fotsiny dia hoe misy diso ny boky ny Jenezy (Genesisy). Tsy izao tontolo izao no izao tontolo izao ao fa ny izao tontolo izao @ ilay A/tra manjaka @ izao tontolo izao antsika... eny e, mety diso koa aloha izany fa mety misy hoe tena A/tra @ izao tontolo izao an'ny izao tontolo izao fa en tt cas ny subalterne sy aides ohatra hoe anjely/demony dia any @ planeta hafa fotsiny no mipetraka. Ireo dia "misy" ambonimbony kokoa noho ny olona fa amban'i A/tra ary voaprograma hiaro/hanakorotana ny fiainan'ny ol...
Ilay lazaina fa hoe afobe sy hoe paradisa iny dia planeta na kitana hafa. Ny olona izany dia mizara roa ny momba azy dia ny composante vatana sy ny fanahy. Rehefa maty ny olona dia miala ny vatana fa ny fanahy no "miampita" makany @ le planeta tokony handehanany. Mety hoe teleporation koa io fa zany hoe techniquement izany dia hoe fampitana ny matiere "fanahy" (@ le dimension 10 io an). Ny afobe izany dia planeta mamaivay, ohatra hoe masoandro. Ozy hoe afo tsy mety maty ozy, otran'ny masoandro izay inoana fa mbola misy milliard taona vao ho lany ny angovo ao... Ny paradisa kosa ny planeta hiainan'i A/tra. Araka ny efa volaza ihany hoe hiara hiaina amiko ozy... efa afaka manao presumption kely sahady eto hoe etat "fanahy" izany i A/tra, na du moins izay mipetraka any @ planetany. Ohatra hoe ny anjely...
Tsy haiko eee,,, rediredy,,, tsy zakan'ny saiko... aleo alou hidaina kely
sniff sniff chouff chouff
Posted by simplex at 20:17 Hametraka hevitra (6) ¦ Verindrohy (trackback) (0) ¦ Rediredy